Tontonana tsara indrindra boaty karatra maina mpanamboatra thermoplastic sy orinasa | Wanhoo
Tontonana maina karatra boaty-Thermoplastic
Ny boatin'ny entana maina, indraindray antsoina koa hoe kaontenera maina, dia nanjary ampahany lehibe amin'ny fotodrafitrasa fitaterana entana. Aorian'ny fitaterana ny kaontenera intermodal, ny boaty enta-mavesatra dia mandray ny andraikitra amin'ny fandefasana kilometatra farany. Matetika amin'ny karama vy ny cargos nentim-paharazana, na eo aza izany vao tsy ela akory izay, tontonana vaovao mifangaro – mamorona endrika amin'ny famokarana boatina entana maina.
Ny fampidirana ny boatin'ny karatra maina
tontonana sandwich mitambatra dia safidy mety amin'ny boaty entana maina.
Maninona no mifidy hoditra CFRT ho an'ny takelaka tantely PP
Ny fibre fitaratra mitohy dia manome tanjaka tsara kokoa. Ny endrika famolavolana malefaka dia afaka manome hery na aiza na aiza. Ny CFRT dia misy resina PP, azo hafanaina sy voahosotra amin'ny takelaka tantely PP mivantana, mba hahafahany mamonjy ny vidin'ny sarimihetsika na amin'ny lakaoly. Ny endriny dia azo natao ho anti slip. Maivana kokoa ary azo averina ampiasaina. Porofon-drano sy hamandoana
Ny tombony lehibe dia ny manaraka
Ny takelaka thermoplastic izay nohamafisin'ny fibre dia maivana kokoa noho ny vy. Amin'ny fanaovana kaontenera entana, io no tombony lehibe indrindra amin'ny famoahana entana.
Ny fitaovana thermoplastic dia azo averina 100%. Mandray anjara bebe kokoa amin'ny tontolo iainana izy ireo noho ny fitaovana vy.
Raha maivana, ireo takelaka boaty mitambatra dia tsy latsa-danja noho ny fanoherana ny fiantraikany, na dia mahery noho ny fitoeran-by aza. Izany dia satria ny fibre mitohy amin'ny fitaovana dia manamafy ny tanjaky ny panneaux entan'ny entana.
Ho fanampin'ny fandefasana kilometatra farany lavitra, ny takelaka boaty maina entana dia azo namboarina ihany koa ho an'ny fampiharana isan-karazany, toy ny:
Fonosana fonosana kely (mampiasa takelaka tantely 8mm ka hatramin'ny 10mm na takelaka mitambatra 3mm)
Kaontenera vokatra marefo (ho an'ny fahagola sy fitehirizana fiara lafo vidy)
Reefer trailer sy van mangatsiaka (Ny thermo-trano manokana dia afaka mitazona ny hafanana ao anaty kaontenera.)
Kaontenera misy tanjona ankapobeny
Akorandriaka amin'ny fitaovana elektrika
Ny vokatray dia novolavolaina manokana ho an'ny mpanamboatra kamio sy ny tranofiara ary ny mpivarotra vata fampangatsiahana. Ny fomba fananganana sy fivoriambe manavao dia hampihena ny vidin'ny famokarana anao ary hanome anao ny fanapahana farany amin'ny fifaninanana. Ny faritra rehetra dia feno fonosana, tapahina araka ny halehibeny ary ampidiro ny lakaingo azo antoka momba ny sakafo mandroso indrindra.
Teo aloha: Pipe Thermoplastic nohamafisina
Manaraka: Zipo tranofiara-Thermoplastic